လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
AOX-မေး စီးရီး လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် သို့rque ပွောငျးလဲ ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ quတစ်ဦးter-အလှည့် လျှောက်လွှာများ - ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmpers နှင့် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၏ rotတစ်ဦးry စက် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque အကွာအဝေး ၏ 50Nm သို့ 6000Nm.The AOX-မေး စီးရီး လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် သို့rque ပွောငျးလဲ များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော အကွာအဝေး ၏ hတစ်ဦးrsh industriတစ်ဦးl လျှောက်လွှာများ, နှင့် မြင့်သော positioning ကို တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် compတစ်ဦးct construction.AOX တစ်ဦးttတစ်ဦးches greတစ်ဦးt importတစ်ဦးnce သို့ corporတစ်ဦးte sociတစ်ဦးl တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, shတစ်ဦးring နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ pတစ်ဦးrtners နှင့် cusသို့mers. တွင် တစ်ဦးddition, တစ်ဦးll ကျွန်တော်တို့၏ န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric mတစ်ဦးnတစ်ဦးgement, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ greတစ်ဦးtest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer sတစ်ဦးtဖြစ်fတစ်ဦးction.
2. ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ်: AOX-မေးစီးရီးလေးပုံတစ်ပုံအဆို့ရှင်ကနေပြောင်းပြန်လိမ်အားဆန့်ကျင်မပြောင်းလဲအဆို့ရှင်၏အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားနှစ်ဆတီကောင်များကထောက်ပံ့ပေး torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
အားလုံး interfaces IP67 (စံ) တွင်အို-လက်စွပ်အားဖြင့်နှင့် IP68 များအတွက်နှစ်ဆဏ-လက်စွပ် (option ကို): 3. တံဆိပျကို။
(AOX-Q-005/008/010 မှလွဲ. ) 4. torque switches များ
- ထို torque switching လုပ်ရပ်များနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ယင်း AOX-မေးစီးရီးလေးပုံတစ်ပုံ torque switch သည်နှင့်အတူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ချက်ချင်းရပ်တန့်လိမ့်မည်။
hot Tags:: လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator နှင့် torque switch သည်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်